Delta, emulator nyowani yeIOS isina Jailbreak | IPhone nhau
Delta, emulator nyowani yeIOS isina Jailbreak
Akanyanya nostalgic emitambo yemavhidhiyo mune mhanza nekuti munguva pfupi ivo vanozove neanowanikwa emulator yeIOS iyo yavanokwanisa kutamba mitambo yepasirose yevhidhiyo yemapuratifomu akadai seSuper Nintendo, Game Boy Advance uye mamwe akawanda mapuratifomu. Delta, rinova iro zita rekushandisa iro rinotibvumidza kuti tiite izvi, richawanikwa munguva pfupi iri muApp Store, uye muActualidad iPhone isu takakwanisa kuwana iyo yekutanga Beta uye isu takakwanisa kuyedza, ichitarisa kunaka kwayo kwese, senge yakashambidzika interface kana iko kusununguka uko maROM matsva anogona kuwedzerwa kune ino emulator
NaDelta iwe unozogona kukanganwa kubatanidza yako iPhone kune komputa, kana kuda Jailbreak kuti ugone kuwedzera maROM ekutamba. Iko kunyorera kuri inowirirana neakakura makore ekuchengetedza masisitimu, senge ICloud Drive, Dropbox, Google Drive kana Bhokisi, uye kuwedzera ROM yekutamba kwakareruka sekuiisa kufolda pane chero zvambotaurwa zvimiro zvekuchengetedza, kuzvisarudza kubva kumenu yekushandisa. Uye zvakare, kana iwe ukaisa maROM mune emulator, iyo butiro inozotorwa pasi kubva paInternet, saka uchave neyako vhidhiyo yemitambo raibhurari yakanyatso chenjera kubva pane zvinoonekwa chimiro. Kuenda kune avo vangangoita emusaruro emulators atinogona kungoisa kuburikidza neJailbreak.
Parizvino chete Super Nintendo kana Game Boy Advance ROMs inogona kuwedzerwa, asi mushambadzi anoda kuwedzera mapuratifomu matsva anoenderana neDelta munguva pfupi, uye isu tinogona kunakidzwa muunganidzwa wakakura wemitambo yemavhidhiyo pane yedu iPhone. Parizvino hatizive zvimwe zvakawanda nezvekuti ichave riini kana mutengo wainenge uine, asi isu tinoita Izvo zvakarongerwa kuti zvienderane neMFi vatongi uye kuti iwirirane ne iPhone, iPad uye iPod Kubata. Isu tinokuzivisa iwe nezve kufambira mberi kweprojekiti apo isu tinodzidza data nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Delta, emulator nyowani yeIOS isina Jailbreak
Marcos Cuesta (@marcueza) akadaro
Ndekupi kwandinogona kunyorera beta. Pa peji yepamutemo rinoti rakavharwa. Ini ndaisatomboziva kuti kwaive neruzhinji beta.
Pindura kuna Marcos Cuesta (@marcueza)
Pane chero munhu anoziva kuti nei Mfi inodzora isisashande muIOS 10 (10-10.2)?
Kunyanya iyo Moga Ace Simba, pane iPhone 5, 5s uye 5c
Ini ndaifunga kuti controller yangu yakashatiswa asi ini ndakaedza pane iPod 5g uye ne iPhone 5 inomhanya iOS 9.3.5 uye yakashanda zvakakwana
Kana ivo vakamisa guanajear zvakanyanya uye vakasanganisa kushandiswa kwevamiririri muIOS vangadai vakatonyanya musika, kune vamwe vatambi vezvinyaradzo kupfuura zvaCandy Crush Saga
Wongorora Sudio Regent: anowirirana mahedhifoni ane kuzvitonga kukuru pamutengo wakadzikira
Nemavhidhiyo aya Apple inotarisira kukwezva vaverengi veMutambo weChigaro